Okushiwo amaphupho ngamagundane: ukubona amakhofu aphilayo futhi afile, ukubulala izilwane ngezandla zabo.
Kungani siphupha ngamagundane afile?
Ukuchazwa kwephupho lapho ubona khona udoti, ufile noma ukhona.
Amakhanda ekuchazeni eziningi zezincwadi zephupho ayenze ukuhlukumezeka nokukhwabanisa. Futhi, iphupho elinjalo lingasho ukuthi ugxeka kakhulu ngemuva kwakho futhi usuqede inhlebo. Namuhla sizocubungula indlela yokuhumusha kahle amaphupho ngalezi zinduku nokuthi yini ethembisa umbono owabulala ngawo isilwane.
Iyiphi iphupho eliyiphuphayo mayelana nokuphila nokufa?
Ukuhumusha okuyinhloko kwemibono enjalo kusikisela ukuthi othile ovela endaweni yakho ufuna ukuphinga. Kodwa isilonda esimhlophe sithembisa ukuthi uyasisekela kumuntu onomthelela. Nguye ozosiza ukufeza umgomo oyifunayo.
Futhi, amagundane angabonakalisa imicabango yakho encane kanye nokukhishwa kwe-embitterment kubantu abakuzungezile. Zama ukulawula imizwa yakho futhi ungakhubeki kuzihlobo, ozakwabo nabangani, ngaphandle kwalokho ungenza izitha.
Ukubona isilwane esifile ephusheni kusho ukuthi sekuyisikhathi sokuba umuntu alungise amaphutha esedlule futhi avume icala lakhe ngesimo esithile sokuphikisana.
Uma intombazanyana noma umfana encane ebona isilwane esifile ephusheni, kufanele abheke ngokucophelela umlingani obambisene naye ubuhlobo bomshado. Mhlawumbe lo muntu akazwa lokho imizwa eqotho futhi ejulile njengoba kubonakala kumphuphi. Ngaphezu kwalokho, isilwane esifile sichaza ukuthengiswa komthandi, ngakho-ke kudingeka uqaphele ngokwengeziwe ngesigamu sakho sesibili.
Isilwane esivele sisemgwaqeni, sithembisa izithiyo zephupho emgwaqweni empumelelweni, eyabonga ngenxa yamasu abahlakaniphileyo. Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukunciphisa izindleko zabo, ngoba i-rodent efile ibuye isho izinkinga zezezimali. Zama ukungasebenzisi imali eningi, ngoba phakathi nale nkathi kungenzeka ukuthi ungene esikweletu.
Susa isilwane esifile endleleni ngendlela yezandla zakho noma uma iphela, njengokungathi ngomlingo - uphawu oluhle. Zonke izinkinga zakho zingakwazi ukunqoba kalula futhi ngokushesha ngesikhathi esifushane.
Ezincwadini zephupho kuthiwa ukubona inombolo enkulu yamagundane agijima ngebhizinisi lawo uthi umphuphi ulindele isikhathi esihle sezimali. Ngakolunye uhlangothi, uma ubona izilwane eziningi ezifile ezikuzungezile, usuke unenkinga enkulu yezezimali nokulahlekelwa kwezimali.
Kungani iphupha lokubulala iphosta ephusheni?
Ukubulawa kwe-rodent kuyisibonakaliso esihle kumuntu ophuphayo. Kusho ukuthi umuntu angakwazi ukukhipha isitha sakhe esibi kakhulu. Abantu abakuzungezile bazokhipha ama-masks futhi ekugcineni uzokwazi ukuthola ukuthi ubani umngane wakho oqotho, futhi ubani ozenza sengathi uyena. Ezinye izindaba ezinhle: ungakwazi ukuvula isitha ngaphambi kokuba nesikhathi sokuhlehlisa ngokumelene nawe.
Ngokuhumusha okuhlukile, ukubulala i-rat kusho ukuthi ungakwazi ukuxazulula ukungqubuzana kwangaphakathi okukuhlukumeze isikhathi esithile.
Ukubulawa kwe-rodent, lapho uthola khona ukukhululeka nenjabulo, kubonisa ukuthi umuntu uzokwazi ukuxazulula inkinga ebalulekile ebaluleke kakhulu emhlabeni wonke ukuphila kwakhe konke. Into esemqoka akukona ukushiya indlela ekhethiwe, njengokuxazulula ubunzima obuzoba yinhlanhla.
Uma ubulele isilwane esikhanyayo, kufanele ubheke ngokucophelela abesifazane abasendaweni yakho. Kungenzeka ukuthi ummeleli wesisindo obuthakathaka wena futhi wakha ngokumelene nawe.
Njengoba ijaji elifile ephusheni alikho kahle, abantu abaningi bavele besaba futhi besaba ubunzima obuzayo. Kodwa amaphupho kanye nephupho-izincwadi zidinga ukwazi ngezenzakalo ezizayo ngesikhathi futhi ukwazi ukuvimbela izinkinga ngesikhathi.
Amaphupho namaphupho, izincwadi zokuphupha, ukuhumusha amaphupho, incazelo yamaphupho
Kungani uphupha ukuthi uyalunywa yinja?
Amaphupho e-Erotic owesifazane
Izimpumputhe ziphupha ngani?
Qoqa izinto ku-suitcase ngephupho: ingabe uyisibonakaliso?
Izinyoni zazilele. Ukuhumusha kanjani?
Amakhekhe nge isipinashi namakhowe
I-nail ephukile nezindiza ezingenakubuthwa: u-Anastasia Volochkova wagubha usuku lwe-FSB
Uma kune-toxicosis lapho ukhulelwe
Indlela yokuba umphefumulo kwanoma iyiphi inkampani
Amakhambi omphakathi wokubukwa ubuso
Beyonce - phambi kweplanethi yonke
Ngizama ukuphatha, ukumelana kanjani?
Imikhuba esenza sibe mpofu
Isaladi "enenhliziyo enhle"
Amaphikishi for salads nge izaqathe ngesiKorea
Ingulube nge-anyanisi ne-soy sauce
Izesekeli zezingubo ze-beige
Iqoqo eliyigugu eliyigugu le-SOKOLOV Cruise 2017
Izinwele zezimfashini kunazo zonke zamantombazane e-prom